China Laser Aspheric Lens, Aspheric Lens, Aspheric Lens Mugadziri
Tsanangudzo:Laser Aspheric Lens,Aspheric Lens,Aspheric Lenses,Kubatana Optics,,
Zvigadzirwa zve Laser Aspheric Lens , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Laser Aspheric Lens , Aspheric Lens vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Aspheric Lenses R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 6.33mm Yakareba Kureba: 4.05mm Center Ukobvu: 3.3mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 3mm Yakareba Kureba: 8mm Center Ukobvu: 2.5mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 4.5mm Yakareba Kureba: 8mm Center Ukobvu: 2mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 6.5mm Yakareba Kureba: 12mm Center Ukobvu: 2.36mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 8mm Yakareba Kureba: 11.2mm Center Ukobvu: 2.66mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 10mm Yakareba Kureba: 8mm Center Ukobvu: 3.43mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 5.6mm Yakareba Kureba: 4mm Center Ukobvu: 2.8mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 4.5mm Yakareba Kureba: 4.4mm Center Ukobvu: 4mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 3mm Yakareba Kureba: 1.95mm Center Ukobvu: 1.45mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 7.2mm Yakareba Kureba: 6.24mm Center Ukobvu: 5.36mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 4.5mm Yakareba Kureba: 2.75mm Center Ukobvu: 2.24mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 6mm Yakareba Kureba: 10mm Center Ukobvu: 2.25mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 4.7mm Yakareba Kureba: 6.2mm Center Ukobvu: 3.5mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 3mm Yakareba Kureba: 6mm Center Ukobvu: 1.5mm Nhamba...
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 7mm Yakareba Kureba: 12mm Center Ukobvu: 2.36mm Nhamba...
China Laser Aspheric Lens Vatengi
Iyo aspheric lens inoshandisa chinhu chimwe chete dhizaini, iyo inobatsira kudzikisa huwandu hwemalensi musangano wee optical. Kusiyana nemalensi edenderedzwa, malenzi easpheric ane akaomesesa epasi, uye iyo yakakombama yepasi inoshanduka zvishoma nezvishoma kubva pakati pe lens kusvika kumucheto welenzi. Iyo inonyanya kukosha mukana ndeyekuti inogona kugadzirisa iyo idenderedzwa aberration inokonzerwa neyakaunganidzwa lens mune yekudyidzana uye yekutarisa system. Imwe yemashandisirwo ealepheric lenses inosanganisira kutarisa kuburitsa kubva kune laser diode, iyo isingori chete inoderedza mutengo wese, asi zvakare inopfuura zvikamu zvakagadzirwa uchishandisa echinyakare idenderedzwa malenzi.
Iyo asphere's yakaoma kunzwisisa pamusoro penzvimbo inogona kudzikisira kana kubvisa iyo idenderedzwa aberration uye zvakare kudzikisira kumwe kupenya kwakasarudzika senge astigmatism, ichienzaniswa neyakareruka lenzi. Iyo imwechete aspheric lens inogona kutsiva yakaoma kunzwisisa yakawanda-lens lens. Chigadzirwa chinoguma chiri chidiki uye chakareruka, uye dzimwe nguva chinodhura pane dhizaini yemalensi. Zvinhu zveAsherher zvinoshandiswa mukugadzirwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvakakora-kona uye nekukurumidza lenzi lenzi kudzikisira kudzoka. Madiki akaumbwa aspheres anowanzo shandiswa kuumbiridza diode lasers.
Laser Aspheric Lens Aspheric Lens Aspheric Lenses Kubatana Optics Bk7 Aspheric Lens